Nabani na onomdla wokubhabha kwi-server yam usebenzisa i-JoinFS kunye neLOTS ye-AI ???
umbuzo Nabani na onomdla wokubhabha kwi-server yam usebenzisa i-JoinFS kunye neLOTS ye-AI ???
iinyanga 10 3 kwiiveki ezidlulileyo #900 by fltbuff71
Jonga i-website fsxflywithmanyai.weebly.com ngeenkcukacha
Uya kuseka iqela leendiza ekufuphi futshane ukuba unomdla okwaneleyo.
Ndisebenzisa i-Rikooo ukulandwa kwee-737 kunye ne-747 ipake pack
Awukwazi ukuvutha i-AI kwiqela labadlali abaninzi kwi-Steam, kodwa i-JoinFS inkulu kwaye unokubhabha i-Steam, Ibhokisi, okanye nayiphi na enye i-Flight Sim kwiindiza zehhala.
Andiyi kusebenzisa i-TeamSpeak kwaye kubonakala ngathi bahlawulela umncedisi ngoku ....
Ukuba unomdla, vumela undixelele
Jonga iifoto ezidibeneyo zam kunye neAi Flight Planner. .my server, kunye ne-JoinFS
iinyanga 9 3 kwiiveki ezidlulileyo #996 by fltbuff71
ndikhangele nayiphi na umdla ekungeneni kwiseva kwinqanaba le-MARCH 2018, elineenqwelo ezininzi ze-AI, ngokwakho, kwaye usebenzisa i-DISCORD?
iinyanga 9 2 kwiiveki ezidlulileyo #1003 by fltbuff71
iinyanga 9 2 kwiiveki ezidlulileyo #1007 by fltbuff71
Ixesha ukwenza page: 1.611 imizuzwana